माअाेवादी केन्द्रबाट अलग्गियाे एक समुह, किरातीकाे नेतृत्वमा आठौं महाधिवेशन समुह गठन – Nepal Journal
माअाेवादी केन्द्रबाट अलग्गियाे एक समुह, किरातीकाे नेतृत्वमा आठौं महाधिवेशन समुह गठन
Posted By: Nepal Journal December 27, 2017 | १२ पुष २०७४, बुधबार १३:५१
काठमाडाैं । नेकपा माअाेवादी केन्द्र एमालेमा बिलय हुन गएकाे भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विमति जनाउँदै अाएका वरिष्ठ नेता गाेपाल किरातीले नयाँ समुह गठन गरेका छन् । उनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निरन्तर क्रान्तिको वैज्ञानिक बाटोमा अघि बढ्ने संकल्पसहित तत्काल पार्टी महाधिवेशन आयोजनाको माग गर्न ‘आठौं महाधिवेशन समुह’ निर्माण गरेकाे जनाएका छन् ।
उनकाे विज्ञप्ती जस्ताकाे त्यस्तै हेर्नुस्ः–
किरातीले दर्शन कथा हाल्दै प्रचण्डलार्इ लगाए यस्ताे गम्भीर अाराेप !
यसकारण गएनन् किराँती प्रचण्डकाे प्रशिक्षण लिन
किराँतीकाे प्रचण्डप्रतिकाे सम्बाेधन फेरियाे, श्री प्रचण्डबाट क. प्रचण्ड
Be the first to comment on "माअाेवादी केन्द्रबाट अलग्गियाे एक समुह, किरातीकाे नेतृत्वमा आठौं महाधिवेशन समुह गठन"